राफेल काउनेडो। डिजायर फर एक्सीडेन्ट्सका लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
राफेल काउनेडो। दुर्घटनाका लागि डिजायरको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
फोटोग्राफी: राफेल कौनेडो। फेसबुक प्रोफाइल।
A राफेल काउनेडो म उसलाई व्यक्तिगत रूपमा मध्यस्थको रूपमा भेटें। पाठकको बैठकमा Ámbito सांस्कृतिक द्वारा कुराकानी गर्न डोमिंगो भिलार। त्यसपछि मैले उसलाई ट्र्याक गरें। र यस महिनाको सुरूमा उनले आफ्नो नयाँ उपन्यास जारी गरे, दुर्घटनाहरूको लागि इच्छा। मँ तपाईलाई दयालु र यसमा समर्पित समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु साक्षात्कार जहाँ उनले उनको बारेमा र अरू धेरै कुरा बताउँछन्।
साहित्य वर्तमान: दुर्घटनाहरूको लागि इच्छा यो तपाईको नयाँ उपन्यास हो। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनुहुन्छ र विचार कहाँबाट आयो?
राफेल कानेडो: सधैं जस्तो, विचारहरू तपाईंलाई प्रश्नहरू सोधेर आउँछन्। एक दिन, संयोगले, मैले देखे धेरै जवान केटी त्यो को एक एकाई को हिस्सा थियो दंगा गियर। तिनीहरू कामबाट आएका थिए, उनीहरूको सुरक्षाकर्ता अझै छन्, उनीहरूको वर्दी आटा र अण्डाहरूले दागिएको छ - मलाई किन व्याख्या गर्नु आवश्यक पर्दैन - र परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। जब मैले उनलाई हेरेँ, मैले सोचें: के उनीहरुका बच्चाहरु छन्? के बच्चा घरमा तपाइँको लागि कुर्दै छ? ब्याटोन र बोतलहरू अनुकूल छन्? त्यसैले मैले त्यो महिलालाई वास्तविकताबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरें र मैले उनलाई ब्लान्का जुरेटमा परिणत गरें। र म अनुमान गर्छु कि फिक्शनमा यो धेरै खराब छ।
आरसी: सत्य यो हो मलाई केवल ती चीजहरू याद छ जुन मलाई छोड्दछ केही प्रकारको huella। मसँग चुनिंदा मेमोरी हुनुपर्दछ। मलाई विशेष रूपमा पहिलो किताब याद छैन। मसँग मेरो दिमागमा शीर्षकहरू छन् जुन मैले आफ्नो हातमा पार गरें। तिनीहरू खुशीयाली बाल्यावस्थाको सम्झना हुन्। तर म कसरी भन्न छ भनेउहाँ मेरो पुस्तक पढ्ने बानी परिवर्तन गर्नुभयो, त्यो थियो रिंगको प्रभु। उसको पठनको परिणाम स्वरूप, म हरेक हप्ता पुस्तकहरू किन्न बचत गर्न थालें। र आज सम्म। म पढेर बाँच्न सक्दिन; न त लेखेर नै म गर्न सक्दछु। मलाई यो गर्न सँधै मनपर्‍यो, तर मेरो सामानहरू देखाउन एकदम हिचकिचाउँथें। त्रुटि सबै दिन परिवर्तन भयो म साथीसँग लेखन कार्यशालामा गएँ। वाइन र क्रोकेट्स र omelettes को अंश बीचमा हामी हाम्रा कथाहरू पढ्छौं। अचानक म अरुको लागि लेखिरहेको थिएँ, मेरो लागी होइन, र त्यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्‍यो।
आरसी: म तिनीहरूलाई धेरै मन पराउँछु। म सबै पढ्छु। मलाई लाग्छ कि म आफैंले पाएको भावनात्मक अवस्था अनुसार छनौट गरिरहेको छु। प्रत्येक पुस्तक, वा प्रत्येक लेखकको यसको क्षण हुन्छ। म नयाँ लेखकहरू पनि फेला पार्न चाहन्छुम आफूलाई पुस्तक विक्रेताहरू र मेरो सहज ज्ञानबाट पनि सल्लाह दिन दिन्छु, तर सत्य यो हो कि त्यहाँ एक लेखक थिए जसले यो पत्ता लगाए पछि मलाई लेखक हुन सक्ने सम्भाव्यता विचार गरे। मलाई उनका किताबहरू र आफैं, उनको रहस्य, उनको अनौंठो जीवन, उसको व्यक्तित्व मनपर्‍यो। लाई पढिएको थियो थोमा बर्नहार्ड र साहित्य मा मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन।
आर सी: जो कोही, एक खाने को समयमा एक टेबल र टेबलक्लोथ साझेदारी पछि, म दोहोर्याउन चाहन्छु। धेरैले एक भन्दा बढि खाना खान सक्दैन।
आर सी: म हल्लाले चिन्तित छैनँ, न संगीतबाट, म कहिँ पनि लेख्न सक्छु। मसँग मेरो संसारमा प्रवेश गर्ने सुविधा छ, यदि म मान्छेले घेरिएको क्याफेमा छु भने पनि। केवल कुरा मात्र म स्थिर रहन सक्दिन कि अर्को ढोकामा कुराकानी छ। म जिद्दी गर्दछु, म गडबडी, हल्लाको बारेमा मतलब गर्दिन, तर अर्थसँग जोडिएको शब्दहरू पहिचान गर्ने बित्तिकै म लेख्न सक्दिन।
आरसी: म बिहान बोरिथमबाट आएको हुँ। मेरो दिमाग बिहान बढि फुर्तिलो छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, दिउँसो पढ्नको लागि उपयुक्त छन्। ठाउँ? भवदीय, मसँग निश्चित ठाउँ छैन। म रूखको खोपडीको बिरुद्द झुकाव लेख्न सक्छु, समुद्रको किनारमा रोमाञ्च मुनि वा पृष्ठभूमिमा ज्याज भएको क्याफेमा। मेरो घरमा, म प्राय: जहाँसुकै गर्छु। यो पर्याप्त छ कि त्यहाँ अर्को मसँग कुरा गरिरहेको छैन।
आरसी: म प्रेरणाबाट पढ्छु। म किताब पसलहरूमा जान्छु, म चारै तिर घुमफिर गर्दैछु, र मसँग सधैं फुसफुसी किताब छ, "यो म हुँ।" र त्यसपछि म यो किन्छु। यसले पछाडि कभरको पाठ, आवरण, र अनियमित वाक्यांशलाई प्रभाव पार्दछ जुन मौकाले मलाई पुर्‍याउँछ।
आर सी: अहिले म साथ छु ह्यामनेटMaggie O´Farrell द्वारा।
म एउटा प्लटमा संलग्न छु कि म यसको बारेमा केही भन्न चाहन्न यो अधिक परिभाषित नभएसम्म अवश्य पनि, म ग्यारेन्टी दिन्छु कि नायक कता हो जहाँ ऊ हुनु हुँदैन।
आर सी: सांख्यिकीय, स्पेन ती देशहरूमध्ये एक हो जहाँ यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रकाशित हुन्छ। यो विरोधाभासपूर्ण हो कि पढ्ने सूचकांक समुद्र तल्लो औसत भन्दा मलाई थाहा छैन यस विरोधाभासले प्रकाशकहरूलाई कस्तो नतिजा ल्याउँछ, तर म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु कि यदि हामी थप पढ्छौं भने, यो हामी सबैको लागि राम्रो हुनेछ।
आरसी: मलाई लाग्दैन कि उनले COVID, कैदमा र केहि पनि केहि लेख्यो। मलाई यो लाग्दैन। पहिलेको संसार मेरो लागि धेरै सुझाव थियो, त्यसैले म यस्तो लेख्छु जस्तो कि केहि भएको छैन किनभने म निश्चित छु कि सबै पास हुनेछ र हामी जहिले जस्तै समान समस्याहरूमा फर्कने छौं, तर मास्क वा सामाजिक दूरी बिना। मलाई पहिलो बैठकमा अug्गालो र चुम्बनहरू मनपर्दछ, यदि तपाईंलाई खोप लगाइएको छ कि भनी सोधे बिना।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » राफेल काउनेडो। दुर्घटनाका लागि डिजायरको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
रोजा मोन्तेरोको शुभकामना